Ganacsato ka hadashay Saamaynta Dagaalka Yemen ku yeesheen Dhoofka Xoolaha Soomaalida | Saxil News Network
Ganacsato ka hadashay Saamaynta Dagaalka Yemen ku yeesheen Dhoofka Xoolaha Soomaalida
Berbera (Saxil News.com)-Dagaallada ka socda waddanka Yemen, ayaa saamayn xooggan ku yeeshay dhoofka Xoolaha Dekadaha Soomaalida ka dhoofi jiray, iyadoo toddobadii maalmood ee ugu dambeeyey Duqaymo Diyaaradaha Sucuudiga iyo Xulufadiisu ka geysanayey Yemen, isla markaana ay taasi keentay in la xidho isu-socodka Hawada sare iyo Badda Yemen.
Markab Xoolo sida, ayaa dhawrkii habeen ee u dambeeyey ku xanniban Dekedda magaalada Berbera ee Somaliland, kaasoo xidhista Hawada iyo Badda Yemen, kaasoo ay saaran yihiin Xoolo kala duwan oo isugu jira Lo’ iyo Adhi u dhoofi lahaa dalka Yemen. iyaga oo inta badan marka laga reebo wakhtiga Xajka oo ay Xoolaha Soomaalidu Sucuudiga aad u tagaan ay inta kale sannadkii Suuqyada ugu badan ee Xoolaha Soomaalida loo dhoofiyaa ahaayeen kuwa dalka Yemen.
Haddaba, Warbixnta Warkan, Waraysiyo, Suugaan, Warbixinno kale, Falanqayn ama lafa-gur iyo qodobbo kale-ba waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Barnaamijka toddobaadka ee ay soo saarto Idaacadda Radio Hirad, taasoo aannu idiinkku soo baahinno toddobaadkiiba laba Jeer qaybta Raadyaha ama codka ee AFTAHANNEWS. Barnaamijkaas oo dhan ka dhegayso Liidka Madawga ah ee qoraalkan ka hooseeya.